केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: January 2012
उच्च माबिले प्रस्ताव गरेका ३ एमको नियन्त्रण कतिको सफल होला त ?
अहिले फेसनको रुपमा चलेको छ थ्रि एम । के तपाइलाइ थाहा छ थ्री एम भित्र के के पर्छन ? सायद छैन होला उसो भए सुनि हाल्नुस थ्री एम भनेको मोबाइल, मोटरबाइक र मिनिस्कर्ट हुन् । साच्चै उच्चमाध्यमिक बिधालयका बिधार्थीहरुको लागी यी एमहरु हानिकारक नै हो जस्तो लाग्यो । अरु भन्दा पनि मोबाइले बढाएको बिकृतीलाइ भने रोक्नै पर्छ तर कसरी? आजको युगमा यो असम्भव प्राय छ । बुझ्नेलाइ श्रि खण्ड त नबुझ्ने लाइ खुर्पाको बिड त्यसै कहा भनेका हुन र हाम्रा पुर्खा ले । आजको आधुनिक युगमा मोबाइल आवश्यक बस्तु हो तर अहिलेका टिनएजका भाइ बहिनीहरुले मोबाइलको युज भन्दा मिसयुज बढि नै गरेका छन् । हुन त समयले पाएको प्रबिधिबाट टाढा रहनु राम्रो होइन तर त्यसो भन्दैमा हदै गर्नु पनि हुन्न । यसमा प्रयोग कर्ताको त हुदै हो त्यसमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको पनि दोष उत्तिकै छ । बिधार्थी छुट भनेर पचास रुपैया वा सय रुपैयामा सिमकार्ड प्रदान गरे पछि एक दिन खाजा खाने पैसा वा एउटा नोट बुक किन्ने पैसाले मोवाइलको सिम किन्न थालेका छन् । यसै गरि कलेज फि वा इक्जाम फि भनेर बढि बढि पैसा मागेर फोन सेट किन्ने गरेको पनि पाइएको छ। एनटिसीको सस्तो नेट सेवा होस वा एनसेलको फास्ट इन्टरनेट सेवा दुवैको भरपुर सदुपयोग गर्न अहिलेका भाइ बहिनि खप्पिस भएका छन् । हात हातमा भएको मोवाइलमा मिग ३३ वा फेसबुक चौबिसै घण्टा भए पछि सरले के पढाउनु भएको पाठ कहा पुग्यो भन्ने कुरा के थाहा तिनलाइ? पढ्ने बेला मिग३३ होस वा फेसबुक प्रयोग गर्नु पनि लागु पदार्थ सेवन गर्नु जतिकै नसा हो जसले पक्कै पनि पढाइलाइ बाधा पुराउछ ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 11:20 PM 1 comment: Links to this post
उच्च माबिले प्रस्ताव गरेका ३ एमको नियन्त्रण कतिको ...